Etu ị ghaghachite paswọọdụ nke Gmail ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye ozi | Akụkọ akụrụngwa
Naghachi Gmail paswọọdụ
Villamandos | | Nkuzi
Gmail Ọ bụ taa ọrụ email kachasị eji eme ihe n'ụwa niile na ọ na-esiwanye ike ịchọta onye na-enweghị akaụntụ ha na ọrụ Google, nke na-enye anyị ohere ịnweta ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ nke nnukwu ọchụchọ. Ọtụtụ nsogbu nchekwa nke Yahoo ma ọ bụ arụmọrụ na-arịwanye elu nke ọrụ ndị ọzọ nke ụdị a emeela ka ọ bụrụ ezigbo eze. N'ezie, ọ karịrị ezigbo ọrụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ na nhọrọ ọ na-enye anyị maka ijikwa ozi anyị emetụtala nke ukwuu.
Iji mee ka ụbọchị gị dịtụ mfe taa anyị ga-egosi gị esi nwetaghachi Gmail paswọọdụ, n'ụzọ dị mfe ma na-enweghị mgbagwoju anya, anyị ga-akọwakwa otu esi agbanwe okwuntughe ma ọ bụrụ na nke gị gafee ma ọ bụ nwee enweghị nchebe karịa ka ọ pụtara ìhè. Onweghi usoro abụọ a gbagwojuru anya, mana ị ga-agbaso ntuziaka ndị ahụ n'ụzọ siri ike, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịnwe kpamkpam na-enweghị ike ịnweta akaụntụ email gị.
1 Esi gbanwee okwuntughe Gmail gị
2 Etu esi eweghachi okwuntughe Gmail
Esi gbanwee okwuntughe Gmail gị
Nke mbu ka anyi gabiga esi gbanwee okwuntughe Gmail, nke enwere ike iji oge ọ bụla melite ya, maka nchekwa ma ọ bụ maka ihe ọ bụla nwere ike ibilite n'ụbọchị gị taa. Nkwado anyị bụ ka ị gbanwee okwuntughe site n'oge ruo n'oge, yana kwa oge ị nwetara email dị iche ma ọ bụ njikọ sitere na ngwaọrụ amaghị gị, ihe Google ga-ekwupụta oge ọ bụla ọ mere.
Accessnweta "Akaụntụ M"
Ugbu a n'ime ngalaba "Nbanye na nche" ị ga-ahọrọ nhọrọ «Nbanye na Google». Na mgbakwunye na inwe ike ịgbanwe paswọọdụ, ị nwekwara ike ịlele mgbe ọ bụ oge ikpeazụ ị gbanwere paswọọdụ yana ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ nkwenye nzọụkwụ abụọ nke nnukwu injin ọchụchọ
Họrọ Paswọdu. Iji gbanwee paswọọdụ ọ bụla, ị ga-agbanyerịrị iwu ọ bụla ịbanye na paswọọdụ ị nwere, yabụ ọ bụrụ na ịchetaghị paswọọdụ gị usoro a agaghị enyere gị aka ịpụ na nsogbu ị nọ, mana echegbula ebe ọ bụ na ị ga-enweta nke otu ma ọ bụrụ na ị na-agụ
N'ikpeazụ, tinye paswọọdụ ọhụrụ wee pịa "Gbanwee okwuntughe".
Etu esi eweghachi okwuntughe Gmail
Ọ bụrụ na naanị icheta adreesị ozi-e anyị, mana ọ bụghị paswọọdụ, ị kwesịrị ị na-echegbu onwe na ọ bụ na Google nwekwara echiche banyere nke a ga-ekwe omume. Ma ọ bụ na n'ụzọ dị mfe anyị nwere ike naghachi ma ọ bụ tọgharịa anyị Gmail paswọọdụ dị ka ogologo dị ka anyị na-ezute ụfọdụ chọrọ na-esokwa ihe ndị anyị na-egosi gị n'okpuru;
Nke mbụ, anyị ga-abanye email, nke anyị anaghị echeta paswọọdụ
Ugbu a ọrụ ahụ ga-agwa anyị ka anyị banye ikpeazụ paswọọdụ anyị na-echeta. Ọ dịghị mkpa ihe ị tinyere ebe ọ bụ na anyị anaghị echeta ya. Ọ bụrụ n ’ọ dabara na anyị pinye paswọọdụ maka email, Google ga - agwa anyị
Ọ bụrụ n ’ụbọchị anyị debanyere aha, ma ọ bụ anyị abaa ya ma emechaa, jiri akara ekwentị, Google ga-ezitere anyị a tinye na ngwaọrụ mkpanaka anyị ka anyị banye iji tọgharịa paswọọdụ. N’ezie, ọ dị mkpa na anyị ga - ebu ụzọ gosi akara ekwentị ekwentị edebanyere
Ọ bụrụ na ijisiri ike ikwenye nọmba ekwentị mkpanaka gị wee banye nke ọma zitere koodu ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịgbanwe paswọọdụ nke akaụntụ email gị, site na ihuenyo ị nwere ike ịhụ na foto dị n'okpuru.
Ugbu a ị nwere paswọọdụ ọhụrụ gị, nke ị banyere, ị nwere ike ịmalite iji ya na-ejikarị. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere ụdị okwuntughe ochie ọzọ echekwara na ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ na kọmputa ọzọ, ị ga-agbanwe ya ka onye ọhụrụ wee malite ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu ọ bụla.
You jisiri ike gbanwee ma ọ bụ weghachite paswọọdụ maka akaụntụ email gị Gmail?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no. Gwa anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, na ruo n'ókè anyị nwere ike, anyị ga-anwa inyere gị aka ma nyere gị aka idozi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Naghachi Gmail paswọọdụ
Robert Gretter dijo
Echefuru m paswọọdụ m
Zaghachi Roberto Gretter
Beta 2 nke iOS 11.1 biara nke oma emojis
Amazon chọrọ ka ị zụta ọgwụ gị